तोदा अर्थात धन्यवाद
विगत एकदशकदेखि गीत,गजल, कविता र संस्मरण विधामा कलम चलाउँदै अहिले तोदामार्फत उपन्यास विधामा प्रवेश गरेकी उमा सुवेदी पाँचथरमा जन्मिएकी हुन् । झापाको बुधबारेमा हुर्किएरे काठमाण्डौलाई कर्मथलो बनाएकी उनले रोजगारीको सिलसिलामा इजरायल पुग्दा त्यहाँका यहुदी बृद्धाहरुको मानसिक पीडाले यो उपन्यास लेख्न उद्धेलित बनाएको हो । जसमा नेपाली समाज, नेपाली जनजीवन र नेपाली महिलाका समस्या पनि उत्तिकै प्रस्तुत गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा उनीसँग गरिएको कुराकानी :
🆀 लेखनका थुप्रै विधा छन्, उपन्यास विधा नै किन रोज्नुभयो ?
➠ आख्यान एउटा फराकिलो विषय हो । यसमा लेखकले आफूले देखेका, भोगेका र अनुभूत गरेका यथार्थलाई आफ्नो विचार,कल्पना, कला र सिर्जनशीलताका माध्यमद्वारा अरु विधाभन्दा बढी मुखररूपमा अभिव्यक्त गर्नसक्छ । यसमा चरित्रहरुसित सम्वाद गर्न पाउछ लेखकले । परिवेशको निर्धक्क चित्रण गर्न पाउछ । यसको आयाम फराकिलो हुन्छ र त्यसैले यसमा जीवनको वृहत्तरपाटोलाई लेखकले खुलेर समेट्न सक्छ । त्यसैले म यस विधातर्फ आकृष्ट भएकी हुँ ।
🆀 चर्चाको हिसाबले पछिल्लो समय उपन्यास निकै अगाडि देखिएकाले उपन्यासतिर आकर्षित हुनुभएको त होइन ?
➠ एकदमै हैन । यो उपन्यास मैले बजारको हल्ला सुनेर लेखेको हैन । मैले तोदामा जे भन्न खोजेकी छु, त्यो मैले सबैलाई सुनाउनु जरुरी छ । फेरि मैले यसमा जे विषयवस्तु उठाएकी छु, त्यो गीतगजल वा कविता या नाटकमा समेटिनसक्ने विषय हैन । विषयवस्तुको आयाम फराकिलो भएकोले यसलाई उपन्यासकै रुपमा लेख्न उचित लागेर लेखेकी हुँ ।
🆀 कति समय लगानी गर्नुभयो उपन्यासको लागि ?
➠ म पाँच वर्ष इजरायल बसे । इजरायल बसाइका अन्तिम वर्षहरुतिर मैले यो उपन्यासको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेकी हुँ । यसलाई मोटामोटी आकार मैले त्यतिबेलै दिएकी हुँ । लगभग दुईवर्ष भयो म नेपाल आएको । यो दुई वर्ष मलाई यसको पुनर्लेखन र परिमार्जनमै लाग्यो । उपन्यास रातारात लेखिने विषय हैन । यो लहड र सनकका भरमा लेखिने विधा पनि हैन । यसले साधना माग्छ, अनुसन्धान माग्छ , कला र विचार पनि माग्छ । त्यसैले उपन्यास लेखनलाई धैर्यता पनि चाहिन्छ । त्यो धैर्यता मैले तोदामा देखाएकी छु जस्तो लागेको छ ।
🆀 नेपालको सन्दर्भमा उपन्यासको नाम सर्वथा नौलो देखिन्छ, यो स्थानको नाममात्रै हो कि अरु थप अर्थ पनि बोक्छ ?
➠ यो स्थानको नाम हैन । तोदा हिब्रु भाषाको शब्द हो र यसको नेपाली अर्थ धन्यवाद हो । नढाटी भन्छु, अरु नामभन्दा पृथक देखिन पनि मैले यो नाम रोजेकी हुँ। तर त्यतिमात्र पनि कारण हैन, यो कतै न कतै विषयवस्तुसित जोडिएको पनि छ । यसको मुख्यपात्र पार्वतीको भावना र सम्वेदनासित जोडिएको छ यो शीर्षक ।
🆀 इजरायली पृष्ठभूमी भन्नुभएको छ, कसरी आएको छ उपन्यासमा इजरायली पृष्ठभूमी ? उपन्यासकै पृष्ठभूमी चाहिं के हो ?
➠ यो उपन्यासमा मुलत: इजरायली परिवेशनै चित्रित गरिएको छ । तर नेपाली समाज र नेपाली परिवेश पनि यसमा प्रशस्त आएको छ । नेपालमा कुन परिस्थितिमा परेर नेपाली चेलीहरु विदेशिनु परेको हो भन्ने कुरालाई कथानकका माध्यमबाट प्रष्ट पार्न खोजेकी छु मैले । यसमा माओवादी द्वन्द्व र त्यसले उब्जाएको सामाजिक र आर्थिक समस्या अनि त्यो समस्याबाट मुक्त हुन इजरायल पुगेकी युवतीले त्यहा कामका सन्दर्भमा देखेका यहुदी समाज र त्यो समाजभित्रको समस्या र पीडालाई पनि यसमा समेटेकी छु । इजरायली पृष्ठभुमि भएकोले त्यो परिवेशको चित्रणमा विशेष ख्याल राखेकी छु ।
🆀 नेपाली साहित्यमा महिला उपन्यासकारको उपस्थिति कम छ, जसको उपस्थिति छ, यो पनि प्रभावशाली छैन भन्ने टिप्पणी सुन्नुभएको छ ? यसमा के भन्नुहुन्छ ?
➠ म त्यसरी सोच्दिन । पारिजात, वानिरा गिरीले विगतमा नेपाली साहित्यलाई सुन्दर उपन्यास दिनुभएकै हो । अन्जु पुरी, मनिषा गौचन, शारदा शर्मा,अनुपम रोशी,प्रभा कैनी, शोभा भट्टराईजस्ता उपन्यासकारहरुले आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउनु नै भएको छ । तर उहाहरुको लेखनप्रति मिडिया एटेन्सन कम भएकै हो । हाम्रो सामाजिक संरचना र सोचले पनि यस्तो भएको हो । तर क्रमश: त्यो सोच भत्किदै छ । त्यसैले महिला उपन्यासहरुको आगमन अब पक्कै हुनेछ र बलियो रुपमा हुनेछ । महिलासित भन्ने र भन्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् ।
🆀 महिला साहित्यकारको उपस्थिति नै कमजोर हो या कमजोर बनाएर प्रस्तुत गरिएको हो ? मिडियाको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ यसमा ?
➠ मिडिया पनि कतै न कतै पुर्वाग्रही त भएकै हो । तर म महिला साहित्यकारहरुको उपस्थिति कमजोर नभएपनि अपेक्षाकृत बलियो हुन नसकेको पक्कै हो । नेपालका हामी महिला लेखकको अनुभवको दायर केही सागुरो अवश्य छ । विषयको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि हामीहरुले आवश्यकमात्रामा समय दिन सकेका छैनौं । यी सबै कुराको प्रभाव त लेखनमा अवश्य पनि पर्छ नि ।
🆀 उपन्यासमा बिषय र प्रस्तुतीको नवीनता खड्किएको समालोचकहरुको गुनासो छ ? यो गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्छ तपाईको उपन्यासले ?
➠ म मान्दिनँ । विगतमा नेपाली साहित्यमा प्रशस्त सुन्दर उपन्यासहरु आएकै छन् । अहिले पनि आउने क्रम जारी छ । उपन्यासमा नया नया विषयले प्रवेश पाएका छन् । नयाँ चरित्रहरु देखिन थालेका छन् । नयाँ परिवेशहरु प्रकट हुन थालेको छ उपन्यासमा । केही समालोचकहरु अझै शास्त्रीयताको चश्मा लगाएर उपन्यासलाई हेरिरहनु भएको छ । उहाहरुले त्यो चश्मा फेर्नु भयो भने नेपाली उपन्यासमा धेरै कुरा नयाँ हुन थालेको देखिने ।
🆀 पाठकले तपाईको उपन्यास पढ्नुपर्ने पाँच कारण सोधे भने तपाईको उत्तर के हुन्छ ?
➠ तोदामा मैले नेपाली उपन्यासमा नभित्रिएको परिवेशलाई प्रस्तुत गरेकी छु । यसमा नया खालका चरित्रहरु छन् । नयाँ खालका समस्याहरु यसमा प्रकट भएका छन् । मैले कथाभन्ने शैलीमा सकेसम्म नयाँपन दिने प्रयास गरेकी छु । भाषा सरल होस् तर यसले विषयको संवेदनशीलतालाई गम्भिररुपमा बहन गर्न सकोस् भन्ने सोच पनि राखेकी छु मैले यस उपन्यासमा ।
🆀 अन्त्यमा, पहिलो उपन्यासप्रति कस्तो आशा छ ? पाठकलाई के भन्नुहुन्छ ?
➠ मलाई अहिलेका पाठकहरुप्रति विश्वास छ । उहाहरुले नया विषय र नया परिवेशलाई पक्कै रुचाउनु हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ । उहाहरुले देखेका र चिनेका जस्ता लाग्ने पात्रकै कथा छ यसमा । त्यसैले उहाहरुले यसलाई रुचाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । मेरो उपन्यास नै मेरा पाठकहरुसितको सम्वाद हो । त्यसैले मैले जे भनेकी छु उपन्यासमै भनेकी छु । पाठकहरुले मैले भन्न खोजेको कुरालाई बुझ्नु हुनेछ । अहिलेका पाठक असल आख्यान पढन चाहनु हुन्छ , मैले असल लेख्ने प्रयास गरेकी छु ।